Ụlọ ọrụ ụmụaka ji egwuri egwu |Ndị na-emepụta ihe egwuregwu ụmụaka China Pet, ndị na-ebubata ihe
Anụ ụlọ obere mpịachi ọnụ n'ogbe ihe ụmụaka ji egwuri egwu mpịachi flying diski
Ihe ụmụaka ji egwuri egwu n'èzí: Egwuregwu diski nkịta a bụ ngwá ọrụ maka ịzụ nkịta n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí na ihe egwuregwu nkịta a na-adọta mmasị anụ ụlọ gị n'ụzọ dị mfe, na-enyere aka ọgụgụ isi anụ ụlọ ka ọ dịkwuo mma ma dị mma ịzụ nkịta.
Ihe okike okike: A haziri frisbee nkịta a dị nro maka ụgbọ elu dị anya maka awa ịweta na iweghachite ihe ọchị na mgbe akpịrị na-akpọ nkịta gị, ị nwere ike ịtụgharị ya ma jiri ya dị ka efere mmanya.
Pet Catnip Molar Teeth na-ehicha ụdị azụ azụ ọzụzụ ihe egwuregwu ụmụaka na-emekọrịta ihe maka ihe ụmụaka ji egwuri egwu siliki.
AKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWASỊA: Ihe egwuregwu ụmụaka catnip nke ejiri rọba eke dị elu mee.Ọ dị ka ihe egwuregwu ụmụaka na-ata ma emelitela ha n'oge na-adịbeghị anya, ha na-adịte aka karịa nke na-agaghị emebi ngwa ngwa.
Ihe egwuregwu ụmụaka nwere ahụike: Ọtụtụ oghere na-eku ume n'akụkụ abụọ, na-ekpughe isi catnip, na-adọta nwamba ka ha gwuo egwu.Na-enyere nwamba gị aka nke ọma ịta/sachapụ asịrị ma na-eme ka nwamba nwee uto dị mma.
Nkịta nkịta ụmụaka ji egwuri egwu na-ehicha ọkpụkpụ ọhụrụ, ihe ụmụaka ji egwuri egwu
Multifunctional na multipurpose stick brush: Nkịta ezé nkịta nke ị na-enweghị ike idobe ya na-eme ka nkịta ghara ikwe omume ịjụ ọnwụnwa nke ihe egwuregwu ụmụaka.Ezé nkịta na-ehicha ahịhịa eze nwere ike ichebe ahụike ọnụ nke nkịta, ezé dị ọcha, ma mee ka nkịta ume ume ọhụrụ, dị ọcha na ahụike.